Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray Masar (Sababta booqashada & cidda uu la kulmayo) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xassan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay gaaray magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar.
Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ah wasaaradaha arrimaha dibedda, C/raxmaan Ducaale Beyle, Maaliyadda, Xuseen Cabdi Xalane, Hidaha & Tacliinta sare, Ducaale Aadam Maxamed, Arrimaha cadaaladda & Dastuurka, Faarax Sheekh C/qaadir, Xildhibaan Daahir Maxamuud Geelle iyo xubno kale.
Wafdiga madaxweynaha waxaa garoonka diyaarahada Qaahira kusoo dhaweeyey wasiirka tacliinta dalka Masar.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa magaalada Qaahira u tegay casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dhigiisa dalkaas C/fitaax Al-Siisii isagoo kulamo muhiim ah la qaadan doono madqaxda ugu sareysa dowladda Masar.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Qaahira, C/laahi Xassan Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweynuhu la kulmi doono xoghayaha guud ee jaamacadda Carabta Nabiil Al Carabi iyo xubno katirsan madaxda sare ee ururkaasi kuwaasoo uu madaxweynuhu kala hadli doono arrimo dhowr ah.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya, Xassan Sheekh Maxamuud ayaa intaa kadib la kulmaya madaxweynaha dalka Masar C/fitaax AlSiiSi oo ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada dal iyo sidii ay dowladda Masar u taageeri laheyd dowladda federaalka.
Waa markii labaad ee madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh booqasho ku tago Masar tan iyo markii xilkaas loo doortay, isagoo horay Qaahira uga qeybgalay madaxweynaha xilligaan ee dalkaas C/fataax Al-siisi.